अष्ट्रेलियाको खराब शुरुवात, खाता नखोल्दै कप्तान आउट ! - Everest Dainik - News from Nepal
अष्ट्रेलियाको खराब शुरुवात, खाता नखोल्दै कप्तान आउट !
काठमाडौं, फागुन १८ । भारत विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा अष्ट्रेलियाले खराब शुरुवात गरेको छ । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको अष्ट्रेलियाले खाता नखोल्दै विकेट गुमाएको छ ।
उसले कप्तान आरोन फिंचलाई शून्य रनमा गुमाएको हो । उनलाई जसप्रित बुमराहले आउट गरे । खेल भारतको हैदरावादमा भइरहेको हो । यसअघि, अष्ट्रेलियाले भारतसँगको २ टी- २० सिरिज सिजतेकाले वान डेमा पनि आफ्नो शानदार प्रदर्शन कायम राख्न चाहन्छ । यस्तै, भारत टी २० मा बेहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ ।
याे पनि पढ्नुस सुखद भविष्यको प्रतीक्षामा नेपाली क्रिकेट, गल्ती सच्याउने अन्तिम अवसर
ट्याग्स: aaron finch, Australia Vs. India, Cricket